China L-Threonine CAS 72-19-5 maka ndị na-emepụta Pharma Grade (USP) | Ekele
Aha ngwaahịa ：: L-Threonine
Dị ka nri mgbakwunye nri, a na-etinye L-threonine (Abbreviated Thr) na fodder maka piglet na anụ ọkụkọ. O bu abuo amino acid na amachi na nri swine na uzo ato igbochi amino acid na nri okuko.
1. Karịsịa eji dị ka nri nri.
2. Jiri dị ka nri ekwukwa n'akwụkwọ emeju. A na-etinyekarị ya na fodder maka piglet na anụ ọkụkọ. O bu abuo amino acid na amachi na nri swine na uzo ato igbochi amino acid na nri okuko.
3. Ejiri dị ka mgbakwunye na-edozi ahụ ma jiri ya na nkwadebe nke ịmịnye amino acid.
4. Eji ya na ọgwụ adjuvant nke peptic ọnya ma na-ejikwa ọgwụgwọ nke anaemia, angina, aortitis, obi insufficiency na ọrịa ndị ọzọ nke gbasara obi.
L-Threonine ka microbial gbaa ụka na-eme glucose dị ka akụrụngwa, wee na-emezigharị mgbe akpụkpọ ahụ na filtration, ịta, crystallization, ihicha na usoro ndị ọzọ. Dabere na nsị nke microbial, L-threonine dị mma ma bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya na-enweghị nsị n'akụkụ na-egbu egbu ma dị na nri dịgasị iche iche (gụnyere nri nri ụlọ ọrụ mbupụ ebupụ) maka nchekwa Dịka amino acid dị mkpa, a na-etinye L-Threonine n'ọrụ na mgbakwunye nri, mgbakwunye nri na ọgwụ na ihe ndị ọzọ.
Dịka ntinye nri, L-threonine bụ ngwaọrụ dị ike na-enyere aka melite ogo nri ma belata ọnụahịa nri maka ndị na-emepụta nri. L-Threonine agbakwunyere na nri piglet, nri ezì, nri ọkụkọ, nri oporo na nri eel na lysine n'ozuzu. L-Threonine na-ekere òkè ya n'ọtụtụ ụzọ dịka inye aka na-edozi amino acid iji mee ka uto dịkwuo elu, meziwanye anụ ahụ, ịnweta ibu na ịdabere na anụ pasent, na-agbada usoro ntughari nri, na-eme ka uru nri na-eri nri nwee amino acid na-adịghị mma. chekwaa ihe ndị na-edozi ahụ ma belata ọnụahịa nke nri site na igbutu ndị na-edozi ka a gbakwunye na nri, na-ebelata nitrogen a na-achụpụ na nsị anụ ụlọ, mmamịrị na ammonia yana ọnụego ntọhapụ ya na anụ ụlọ na ụlọ ọkụkọ, na inye onyinye iji wulite ụmụ anụmanụ na-eto eto. usoro mgbochi iji guzogide ọrịa.
Ihe njirimara Kwezie
Nnwale 98.5% ~ 101.5%
PH Uru 5.0 ~ 6.5
Loss na ihicha 0.2%
Fọduru na mgbanye ≤0.4%
Arọ Ọcha (dika Pb) .000.0015%
Amino acid ndị ọzọ Ihe kwekọrọ
Specific Ntughari -26,7 Celsius ~ -29,1 Celsius
Nke gara aga: L-Methionine CAS 63-68-3 maka ọkwa Pharma (USP)
Osote: L-Isoleucine CAS 73-32-5 maka ọkwa Pharma (USP / EP)
L-Threonine Nri Nri, Gralọ ọgwụ Pharm L-Leucine, 73-32-5 L-Isoleucine, L-Valine 72-18-4, L-Threonine Pharm ọkwa, Nri oriri na-edozi ahụ,